विचित्र संसार  OnlineKhabar ☰
Trending Now#नेपाली चलचित्र#स्थानीय चुनाव#सरकार#बलिउड#प्रचण्ड#सेयर#माओवादी केन्द्र
लोग्ने बन्ने तयारीमा भुपु श्रीमती
महिलाले श्रीमान बनाउनका लागि राम्रो पुरुष खोज्ने गरेको कुरा त नौलो भएन । तर के महिलाले आफ्नै लागि असल श्रीमती खोजिरहेको कुरा सुन्नुभएको छ – सुन्ने कुरै भएन । आखिर महिला त आफै श्रीमती हुने जात, लोग्ने पुरुष पो खोज्छन् त । तर पाकिस्तानमा भने एक श्रीमतीले राम्री कन्याको खोजी गरिरहेकी छिन् ता की...
ककटेल रक्सीले १४ महिनादेखि हिक्क-हिक्क
हिक्क आउनु वा बाडुल्की लाग्नुलाई हाम्रो समाजमा कसैले सम्झेर यस्तो भएको हो भन्ने चलन छ । तर वैज्ञानिकहरुका अनुसार फोक्सोका मांशपेशी खुम्चिँदा हिक्क आउँछ । केहीबेरको हिक्कले नै हामीलाई थकाउँछ । हिक्क रोक्न अनेकथरी उपाय गर्न थालिहाल्छौँ । यदि १४ महिनासम्म लगातार हिक्क आइरने हो भने मान्छेको हालत के होला – विचरा एक आइरिस...
विश्वमा मानव सभ्यताको इतिहासमा रोमन सभ्यता निकै चर्चित सभ्यता हो । आजभ्दन झण्डै २ हजार वर्ष पहिले रोमन सभ्यताको जगजगी थियो । रोमन सभ्यतालाई तत्कालिन अवस्थाको निकै विकशित सभ्यता मानिने भएपनि यो सभ्यतामा केही त्यस्ता प्रथाहरु कायम थिए जो सुन्दैमा पनि आङ जिरिंग हुन्छ । रोमन सभ्यतामा मानिसको तातो रगतलाई रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्थ्यो...
कानून पनि कस्ता कस्ता !
कुनै पनि शासन व्यवस्थामा कानूनको अहम् भूमिका हुन्छ । कानून विनाको शासन लगाम बिनाको घोडा जस्तै हुन्छ । तर कानूनी शासन कायम गर्नका लागि कानून पनि जनमैत्री तथा वैधताप्राप्त हुनुपर्छ । कानूनलाई जनताले स्विकार्नुपर्छ । कानून देशका नागरिकले पालना गर्नुपर्छ र कानूनको उल्लंघन दण्डनीय हुन्छ । तर विश्वका केही देश तथा सहरमा केही त्यस्ता...
आधा मुटु भएका बालकलाई पौडीले बँचायो
जन्मिँदा केवल आधामात्र मुटु भएको मान्छे के बाँच्न सम्भव छ ? हामीकहाँ त कदापि छैन । तर बेलायतमा भने आधा मुटु लिएर जन्मेका एक बालकको स्वास्थ्यमा चामत्कारिक सुधार आयो र अहिले उनी लगभग स्वस्थ बनिसकेका छन् । जन्मिँदाखेरि नै डाक्टरहरुले बच्चा बाँच्ने सम्भावना केवल ५० प्रतिशत मात्र रहेको बताएका थिए । तर चिकित्सा विज्ञानलाई...
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका तन्नेरी छात्राछात्राहरु हालै निर्वस्त्र बनेर खेलकुदमा सहभागी भए । दृश्य देख्दा लाग्छ ती तन्नेरीहरुमा नांगिने र खेल्ने नशा चढेको छ । तर उनीहरु कुनै रमाइलो गर्न वा नशा पिएर त्यसरी नांगिएका होइनन् । स्कुलका ७० जना ठिटाठिटीहरु सामाजिक कार्यका लागि पैसा जुटाउने हेतुले तयार पारिने क्यालेन्डरका लागि निर्वस्त्र फोटोशूट गरेका हुन्...
मान्छे अबुझ तथा अज्ञानी र ल्वाँठ भयो भने त्यसलाई पशुको संज्ञा दिइन्छ । तर केही मान्छे यस्ता हुँदारहेछन् जसले आफुलाई जनावरजस्तै बनाउन चाहन्छन् । सधैका लागि जनावर बन्न चाहने त नहोला । तर जनावरकै रंग तथा हाउभाउमा सिँगारिने र जनावरकै रंगमा सरीरमा पेन्टिङ गरी निर्वस्त्र हुने काम विश्वमा केही मोडेलहरुले गरिसकेका छन् । यो...
सैनिकलाई भियग्रा खुवाउने सरकारको निर्णय
कुनैपनि देशको सरकारले आफ्नो सेनालाई युद्धमा पोख्त बनाउनका लागि तालीम र विकाशका अवसर दिएर चुस्त तथा दहि्रलो बनाउँछ । तर इजरायलको प्रतिरक्षा मन्त्रालयले भने देशका सैनिकलाई यौनवर्धक औषधी भियग्रा खुवाउन निर्देशन दिएको छ । ससस्त्र बलका लडाकु सैनिकहरुको क्षमता बढाउन भन्दै प्रतिरक्षा मन्त्रालयले भियग्रा आपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । प्रतिरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको...
मान्छे कतिसम्म निर्दयी बन्न सकेको हँ ? चीनमा एक महिलाले निर्दयीपनाको पराकाष्ठा प्रस्तुत गरेकी छिन् । ती महिलाले आफ्नै लोग्नेलाई मारेर मासु पकाएकी छिन् । अनहुइ प्रान्तको लुआन सहरकी ती महिलाले आफ्नो लोग्नेलाई मारिन्, उनको जिउ पानीमा पकाइन् अनि प्रहरीमा उजुरी गर्न गइन् । लोग्नेको जिउ शव काटेर पकाएपछि हत्या गरेको प्रमाण नभेटियोस् भन्ने...
५२ वर्षीय छोराद्वारा २८ वर्षीय पितालाई दागबत्ति !
सम्भवत पहिलोपटक ५२ बर्षका छोराले आफ्ना २८ बषिर्य बाबुलाई दागबत्ति दिन गइरहेका छन् । हरियाणाको मिरपुर गाउँका रामचन्द्र यादव अब आफ्ना फौजी बाबु हवलदार जगमाल सिंहको शवको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । जगमाल सिंहको शव ४५ बर्षदेखि ग्लेसियरमा पुरिएको थियो । उनले सपनामा पनि सोंचेका थिएनन कि बिमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफ्ना पिताको शव ४५...
ब्वायफ्रेण्डको पैसा चोरेर मलद्वारमा लुकाउँदा…
आफ्नै ब्वायफ्रेण्डको पैसा चोरेर मलद्वारमा लुकाउँदा अमेरिकाकी एक महिलालाई ठूलै आपत परेको छ । अमेरिकाको टेनिसीकी बासिन्दा क्रिस्टी ब्लाकले आफ्नो ब्वायफ्रेण्डको ५ हजार डलर चोरेर त्यो पैसालाई लुकाउन मलद्वारभित्र घुसाउँदा उनी झण्डै खुस्किएकी हुन् । समाचार अनुसार ब्वायफ्रेण्डको पैसा चोरेर मलद्वारमा लुकाएर कुलेलम ठोकेकी ब्लाकले पछि उक्त लुकाएको पैसा मलद्वारको नलीबाट निकाल्न खोज्दा निस्किएन...
अन्तरीक्षबाट खिचिएका विचित्र टापु (फोटोफिचर)
यी तस्वीरहरु हेर्दा अचम्म लाग्छ । आखिर के चिजका तस्वीर होलान् यी ? भन्ने जिज्ञासा समेत उत्पन्न हुन्छ । यी तस्वीरहरु अन्तरीक्षबाट खिचिएका हुन् । यी तस्वीर कुनै हावाको फोकाका तस्वीर होइनन् । यी विश्वका नामूद टापुहरुका तस्वीर हुन् । विभिन्न भु उप्रगहले खिचेका विश्वका विभिन्न महासागरमा अवस्थित यी टापुहरुका यस्ता बिहंगम तस्वीर सायदै...
३प्रेमगीत २ र रुद्र’ प्रदर्शनमा, जान्नुहोस् कस्तो छ सुरुवाती व्यापार ?
४सुस्मिताले रसाइलीसँग गरिन् आत्मालोचना